Ikhabethe elingaphambili kweLake elithulile futhi elinethezeka - I-Airbnb
Ikhabethe elingaphambili kweLake elithulile futhi elinethezeka
Annandale, Minnesota, i-United States
Ikhabethe elihle lechibi e-Moose Lake ngasentshonalanga ye-Annandale MN. Indawo enkulu eyisicaba ene-120 ft yogu lwechibi kanye namatheku amabili anendawo yokubhukuda. Goqa umpheme ngamafasitela amakhulu ukuze uthole ukubukwa okuhle kwechibi. Ichibi elinokuthula elinokuthula lilungele i-kayaking, ukugibela izigwedlo, ukuntanta, nokuhamba ngesikebhe.
Indawo ekahle yokubalekela ekhabetheni eliphumulele nelinokuthula ngaphezu nje kwehora entshonalanga ye-Twin Cities. Amakamelo okulala amabili (imibhede yezindlovukazi) kanye nosofa bokulala begumbi lokuhlala (indlovukazi) elinekhishi elivuselelwe nezindawo zokugezela. Amatafula amakhulu okudlela angaphakathi nangaphandle afanele ukudla kweqembu, izingxoxo, nezindida. Igrill yegesi yangaphandle yokugcoba, kanye nendawo enotshani eyanele yokuletha imidlalo yakho yasegcekeni.
I-Moose Lake Cabin itholakala ekugcineni komgwaqo omuhle wasemakhaya. Igceke elibanzi namadokodo amabili kunikeza indawo eningi phakathi komakhelwane. Leli chibi ligxile ekuthuleni nasekuthuleni ngemidlalo yokuzilibazisa efana ne-kayaking kanye ne-paddleboarding. Imidlalo yezimoto efana nokuhamba ngesikebhe, i-jet skiing, ishubhu/ njll. ingajatshulelwa emachibini amakhulu aqhele ngamakhilomitha ambalwa (ngokwethulwa kwezikebhe okufinyelelekayo).
Thina (Patsy & Joe) sisendaweni ye-Moose lake kanye nezindawo ezisentshonalanga ye-Twin Cities. Sinezingane ezimbili (eyodwa ishadile, enye ezoshada maduze), nabazukulu abathathu. Sobabili sizamile futhi, sesithandana ne-Moose Lake futhi sibeke uthando oluningi namandla ekwenzeni ikhabethe libe indawo ekhethekile yokuhlangana yomndeni lapho kwenziwa khona izinkumbulo.
Kungumgomo wethu ukwenza ukuhlala kwakho ekhabetheni kuntofontofo, kujabulise, kanye neholide lonyaka esingalilangazelela.
Thina (Patsy & Joe) sisendaweni ye-Moose lake kanye nezindawo ezisentshonalanga ye-Twin Cities. Sinezingane ezimbili (eyodwa ishadile, enye ezoshada maduze), nabazukulu abathathu.…
Hlola ezinye izinketho ezise- Annandale namaphethelo